Patent Naqshad Dhammaystirka Chrome: qasabada saxanka jikada oo hoos u dhacday oo ku dhammays tiran koroomeed oo leh farshaxan qurux badan; Tubada qoor-gooska leh ee leh qaanso sare oo qurxoon, casri ah oo qurux badan, waxay gurigaaga ku dari doontaa qurxin gudaha ah oo caadi ah
Madaxa buufiyeyaasha-Functional: Si fudud ayaa looga beddelaa qulqulka si loo buufiyo hababka buufinta, tuubada saxan ee leh aerator ABS si loogu buuxiyo dheriga si dhakhso ah, waxay ku habboon tahay in lagu dhammaystiro nadiifinta waajibaadka culus ee qulqulka xasilloon, sidoo kale waxay badbaadin kartaa in ka badan 50% biyaha, iyada oo loo marayo farsamada shaandhaynta si loo hubiyo heerka biyaha
Tiknoolajiyada buufiye-ka-soo-baxa: 1.7 mitir tuubo aan qarxin oo leh kubbad cufisjiid si ay madaxa buufinta uga celiso si habsami leh oo fudud. Adapter-ka dabaasha ee u oggolaanaya dabacsanaan, pivot oo gaara meel kasta oo ay adagtahay in la helo
Saxan sagxad ah oo loogu talagalay 1 ama 3 godad: qasabadaha jikada ee gacanta kaliya leh waxay la socdaan 2 tuubo oo biyo ah (kuleyl & qabow), saxan sagxad ah oo loogu talagalay 1 ama 3 dalool oo lagu rakibayo, oo ku habboon noocyada kala duwan ee saxanka, looma baahna in laga walwalo dhibaatada godad foosha xun ee 3 godad. Waxa kale oo aanu ku siinaynaa qalab rakibaadda oo dhamaystiran
QalabkaJidhka zinc alloy & naxaasta, 35mm kartoonada dhoobada ah, gees kasta iyo kala-goysyada si adag ayaa loo shaabadeeyey, iyadoo la hubinayo inaan dhibicda lahayn, rasaasta iyo aan daxalka ahayn; DAMMAANKA 5-SANNO iyo TAAGEERADA MACMIILKA ayaa la bixiyaa. Waxay daboolaysaa soo celinta xaddidan ee 90-maalmood.